နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ Access has been denied သုံးတော့မည် - MYSTERY ZILLION
နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ Access has been denied သုံးတော့မည်
April 2011 edited April 2011 in Computer Humor
ုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီဖြစ်စေရန် ယခု ၀က်ဆိုဒ်ဖွင့်တိုင်းပြသလျက်ရှိသည့် Access has been denied. Problem loading page, Network error.... စသည့် မက်ဆေ့ချ်များကို ယခုလမှ စ၍ စတင်အသုံးပြုတောမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်.....
Sounds interesting, meanwhile, I'm also working on something called "Burma's Greatest Project : Project 404".
we are familiar with those messages.
ကျွန်တော်ကတော့ အဲလိုအဖြစ်မျိုး ဖြစ်မယ့်အစား ဟိုအရင် တုန်းက အင်တာနက် မရှိတုနး်ကလိုပဲ ပြန်နေချင်တယ်။ စိတ်ပင်ပန်းလွန်းလို ့
နောက်ထပ် Problem Loading စာမျက်နှာ, Forbidden ရတနာပုံ, Server ပျောက်သွားပြီ...........စသည်စသည် များလည်း ထပ်ချပြမည်ဖြစ်ကြောင်းးးးးးးး ;P
ရတနာပုံ တယ်လီပို့မှ တစ်ခါ Click လုပ်ပီးလျှင် သုံးနှစ် အိပ်လို့ရသော ကွန်နက်ရှင်တစ်မျိုးကို ဆန်းသစ်တီတွင်လိုကြ်ပီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်မှာ မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မှ စတင်သုံးစွဲခြင်း မရှိသေးပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပထမဦးဆုံး တီတွင်ခဲ့သော မြန်နှုန်းနိမ့် ကွန်နက်ရှင်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ မြန်နှုန်းနိမ့် ကွန်နက်ရှင်ကို တီတွင်ခဲ့သော ရတနာပုံတယ်လီပို့မှ အိုင်တီ ပညာရှင် ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာ မတောက်တခေါက်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရာတွင် " ကျွန်တော်တို့ ဒီလို ဘယ်နိုင်ငံကမှ စတင်အသုံးပြုနိုင်သေးတဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကို အသုံးပြုနိုင်တာ ဂုဏ်အရမ်းယူပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဒီလို ကွန်နက်ရှင်ကို ထုတ်လွှင့်နိုင်ဖို့ တော်တော်လေး အချိန်ကုန် ငွေကုန်ခံပြီး လူအပင်ပန်းခံ လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကွန်နက်ရှင်ကြောင့် ဂင်းနစ်စံချိန်တောင် ချိုးဖျက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အချိန်အတော်ကြာကြာ ဒီစံချိန်ကို ချိုးဖျက်နိုင်မယ့် နိုင်ငံပေါ်လာမယ်မထင်ပါဘူး" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်ပြီး အိုင်တီ ပညာရှင် ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာ မတောက်တခေါက်က မြန်မာလူမျိုးများအတော် များများမှာ ဂျီတော့နှင့် ဖေ့ဘွတ်ခ်သာအသုံးပြုကြသဖြင့် အဆိုပါ နှစ်ခုသာ ၀င်နိုင်သော အင်တာနက် ကွန်ယက်တစ်ခု စီစဉ်ထားကြောင်း၊လက်ရှိ စျေးကွက်စီးပွားရေးစျေးကွက်နှင့် အညီ Access has been denied၊ Network Error ၊ connection time out အစရှိသည့် စာမျက်နှာများတွင် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ကြော်ငြာထည့်သွင်းနိုင်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
အရမ်းမိုက်တယ်...မှန်လိုက်လေခြင်း..... Heart ထိတယ်ဆိုတာဒီလိုစာမျိုးထင်ပ.... ဆက်လုပ် ... အားပေးနေမယ်နော.....
အကောင်းဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Internet ဖိုးသက်သာတာပေါ့နော့ ..
<P>#$##%$%####@# ; they make close,our eyes n brains,,,,after5year ...myanmar's knowledge zero....we can't </P>
<P>work out oversea....waa...</P>
ROFLMAO <br><br>Hey besides all the blockages, we still got this site which has not been blocked. <br><br>HAHAHA<br>
အင်တာနက်ဖိုးသက်သာတာ မဟုတ်ဘူး၊ပိုကုန်တာဗျ။<br>ကွန်နက်ရှင်မရတော့ စောင့်ရင်း စောင့်ရင်းနဲ့ အင်တာနက်သုံးချိန်တွေတက်လာတာလေ၊<br>ဟီး///<br>
why do the Professor Ma Taut Da Kauk wear earpiece and.......travel back to Time ....to Yatanarpon Age ???? <div>The name "Yatanarpon Teleport" is so much interesting and... as it's name... it is rolling back to the 18** yrs...</div><div><br></div> :!! :!!
agree with nwaiken :P
good news for Myanmar IT.
access denied လုပ် လဲ ဒါအကုန်ဘဲလား မေးရုံဘဲကျန်တော့တယ်
ဟင် ဟိုက ရင်ဖွင်နေပါတယ်ဆို မြောက်ပေး
ဟင်နည်းလေးများရိႈရင်မစပါ ဒီက သူပြဳသမျႈနုနေရတယ်